Ahụmahụ Semalt: Ihe mere bọtịnụ maka weebụsaịtị na-egosi na Na Google Analytics
Ịntanetị na-enyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịga nke ọma n'Ịntanet na azụmahịa ha. N'otu ụzọ ahụ, e nwere otu akụkụ nke usoro dum nke ndị omempụ na ndị ọzọ obi ọjọọ na-agbalị iji mepụta ha ntanetị n'ịntanetị. Ego kachasị na-enweta ndị ahịa ha n'Ịntanet site na ịmepụta ụlọ ọrụ na-azụ ahịa e-azụmahịa - asphalt milling md. Na ahịa dijitalụ , ọ ga-ekwe omume itinye ọtụtụ mgbalị nke ịme ozi ịntanetị kpamkpam site na igbe mbata gị. Mbụ, nkà na ụzụ ahịa ahịa na-eweta ngwá ọrụ ọhụrụ iji rụọ ọrụ nhazi dị ka nchọpụta njikwa ọchụchọ (SEO).
Ụfọdụ n'ime ngwá ọrụ ịntanetị na-agbaso mwakpo spam. Ọ dị mkpa iji gbochie spam spam na ụfọdụ n'ime ngwá ọrụ ndị a iji mee ka oge nlegharị oge niile nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Cheta, nchebe nke saịtị gị dabere na usoro mgbochi spam na ebe iji gbochie spam. Ị nwere ike ichebe ozi onye ọbịa gị nakwa nke kwụsiri ike nke azụmahịa gị. Nchịkọta Google bụ ngwá ọrụ SEO dịka ihe ọtụtụ webmasters nwere ike ịba uru maka ọtụtụ mgbasa ozi ahịa. Ntugharị ntinye aka na ntanetị dịka bọtịnụ maka weebụsaịtị sitere na Google Analytics bụ omume.
Lisa Mitchell, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ọrụ nke Semalt , na-akọwa ebe a iji gbochie spam spam dịka bọtịnụ maka weebụsaịtị.
Na Google Analytics, ị nwere ike ịkwụsị okporo ụzọ na-abịa site na ngalaba ụfọdụ. Ọ ga-ekwe omume ịmepụta ụzọ nke nwere ike ime ka ozi nchịkọta gị na-enweghị ihe gbasara spam ozi ntanetị. gbanwee nyocha nke data azụmahịa na-eduga na ọnụ ọgụgụ ụgha.
E nwere usoro ntanetịime ole na ole nwere ike iji nweta ebe nrụọrụ weebụ ha site na bọtịnụ maka weebụsaịtị ma ọ bụ Darodar:
Jiri ozi ịntanetị echekwara
Iji onye na-enye email nyere gị nchekwa iji kpuchie ndị ọbịa gị site na ndị na-agba ọsọ mbanye bụ ezigbo njem. Ụfọdụ n'ime ngalaba ndị nwere mpaghara spam na-ezigara sitere na isi mmalite ndị a na-amaghị. Ndị na-enye Email nwere ike ichebe ndị na-ege gị ntị site na ozi dị otú ahụ. Ha na-egbochikwa onyinyo ihe oyiyi nke nwere ike iweta mgbalị ndị ọzọ na-akpata nsogbu mbanye anataghị ikike.
Na nchịkọta Google, ị nwere ike iji bọtịnụ maka weebụsaịtị Spam nzacha iji gbochie spam spam site na data weebụ gị. Ị nwere ike ịnakọta ozi ziri ezi banyere arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị yana ị nweta ọtụtụ uru. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike idozi nkwonkwo siri ike n'ịntanetị maka ngalaba gị n'ihi na nchekwa gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Jide ndị na-ege gị ntị na ozi SEO gbasara arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Ha kwesịrị ịma mgbe na otu esi eleghara spam na-ezigara dịka ndị ohi ohi.
Ebe nrụọrụ weebụ e-commerce ọ bụla nwere ọtụtụ ụzọ nke ndị mmadụ nwere ike isi nweta ohere ahịa dị oke egwu. Ahịa na-aga nke ọma na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ e-azụmahịa iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ ha webata ọtụtụ ndị ahịa site n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Site na ahia ahia, ọ ga-ekwe omume ịchọta okporo ụzọ ndị mmadụ nwere ike ịnweta. N'otu aka ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịchọrọ ịbata ndị ọbịa site na ebe ndị dịgasị iche iche iji nyere aka n'ịzụ ahịa. Ọ dị mkpa iji gbochie spam spray na nchịkọta Google Analytics gị ma zọpụta azụmahịa gị site na nnukwu nfu. Nduzi SEO a na-akọwa ihe kpatara ya na otu esi egbochi Darodar na bọtịnụ maka ntinye akwụkwọ ntanetị weebụ na Google Analytics.